Wikipedia:Takelaka/9 2010 - Wikipedia
Moskva? na Moscou (amin'ny fiteny rosy Москва, Moskva, IPA : /mʌskˈva/) dia renivohitra ny Federasion'i Rosia ary tanàna ngeza indrindra any Eoropa.
Eo amin'ny renirano Moskova ny misy an'i Moskva, mitovy anarana amin'ilay renirano ilay tanàna amin'ny fiteny rosy. Eo amin'ny distrika ampivoany, amin'ny lafy eoropeaninan'i Rosia ny misy an'i Moskva.
Moskva dia ny tanàna ngeza indrindra any Eoropa amin'ny isam-poniny mahatratra 10,22 tapitrisa mahery ao an-drenivohitra ary 14,74 tapitrisa raha isaina ny ambanivohitra. Renivohitra ara-toe-karena, ara-politika sy ara-pahaizan'i Rosia ny Moskva, ary 8,9% ny olona any Rosia miaina any Moskva.
Betsaka ny fandraisana anjaran'ny tanànan'i Moskva ao amin'ny tantaran'ny Rosia : Renivohitra ny Grand-Duché-n'i Moskva izy, ary lasa renivohitra ny Empira Rosy ; nafindran'i Pierre le Grand (Petera Ilaibe) tany Saint-Petersbourg ny renivohitra ; very lanja ny tanànan'i Moskva hatramin'ny taona 1918 ; Lasa renivohitry ny URSS Moskva tamin'ny taona 1918. Fantatra amin'ny fanam-pananana ara-maritrano i Moskva : ao ny Kremlin miaraka amin'ny fehivolany, ny katedraly St Basile eo amin'ny Kianja Mena, ny katedralin'i Kristy Mamonjy sy ny Sera Stalinianina Fito. Any Moskva ny foibe ny Partiarka ny fiangonana Ortodoksa Rosy ny monasteran'i Danilov. Eo amin'ny toeran'ny Kremlin sy ny Kianja Mena ny ampivoan'i Moskva.
ny antsoin'ny mponina Rosy "Матушка Москва" (« Matuška Moskva ») (Reny Moskva) ny tananan'i Moskva.
Foiben'ny oniversite maromaro ny tanàna, tany ny fisin'ny Kilalao Olimpika tamin'ny 1980.
Ankehitriny, manan-danja be ny tananan'i Moscou ao amin'ny toe-karenan'i Rosia, mahavokatra ny 25%n-ny PIB ny federasiona izy. Lasa « Géante Capitaliste ». Moskva teo aorian'ny andro komonista ary efa manan-danja Moskva eo amin'ny toe-karena eoropeanina. Ny faribohitr'i « Moskva-City » ny evan'ny fiovan'ny Moskva. Fa tsy nandeha tsy nisy olana io fiovàna io. Ny elanelana ara-toe-karena ny olona dia lasa nihabetsaka avy hatrany : Misy silaka manan-karena ary miha-manan-karena, ary misy ny mahantra miahamahantra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Takelaka/9_2010&oldid=225051"
Voaova farany tamin'ny 25 Jolay 2011 amin'ny 14:53 ity pejy ity.